Wonke umfazi olandela umzimba wakhe kunye nempilo uhlala efuna iindlela ezintsha zokwenza umzimba wakhe uphelele. Enye yale ndlela, eyona nto inomsebenzi kwaye inomdla kwaye inokwenziwa emzimbeni wakho, i-algal yokwambisa. Ukuze kuphunyezwe le nkqubo kwinkqubo yokusebenzisa ekhaya i-alga kelp.
Ukusetyenziswa kwe-algae inezikhombisi-ndlela ezilandelayo - i-calcium kunye ne-iodine zisuse ubuqhophozi, ukukhawuleza isantya, ukunciphisa ukuvuvukala emhlane nasemqaleni, ukususa imibimbi. Ngenxa yetyuwa ephuma kwimizimba yesikhumba kunye namalungu, i-liquid is eliminated. Ukugqitywa kunokwenziwa kokubili kwi-spa nasekhaya. Ezinye ze-algae zongezwa i-oyile ebalulekileyo (iyakuthintela ulusu), ezinye iinongo, ezifana ne-coriander, i-ginger, thyme. Iodine ikulwela ngamandla kunye neekhigram ezidlulileyo, kunye neziqholo zongezwa kwi-algae zenza ukuba kukhuthazwe ngokunyanisekileyo ukuhamba kwe-lymph, kungavumeli ukuba ihlaziye.
Ukugqitywa kwimizi e-algae ingaba yimiba emibini: ukubanda okubandayo kunye nokutshisa okutshisayo.
I-wraps ezifudumeleyo zinciphisa imilambo yegazi, zandisa ukuhamba kwegazi kwizitho kunye nakubisi. Ukufakelwa kwesikhotho kunciphisa iinqanawa, kuqinisa izitya, kususa ubuqhophololo, kususa iibisi ezivela kwizitho kunye nezicubu ezinomkhuhlane ogqithiseleyo. Ikhumba ngexesha elifanayo liqinisa, lihluthe kwaye lifumane ithoni.
Ukufakwa kwinqanaba elwandle
Thatha amacwecwe ambalwa e-algae (inani lamacwecwe lithembele kumzimba wakho), faka i-kelp kwisitya kwaye uphalaze amanzi kwindawo yokushisa. Shiya imizuzu engama-30 ukwenzela ukuba amacwecwe acoce. Ngokuqhelekileyo i-100 gram ye-algae ithululelwa nge litre zamanzi. I-algae exubileyo iphakanyiswe kwiindawo ezinengxaki zomzimba emva kokupenda, i-polyethylene isetyenziselwa i-algae. Inkqubo yokuvala ihlala malunga neyure eli-1.
Ukutshiza okutshisayo kolwandle
Kwisitya sibeka i-algae, sizalise ngamanzi (malunga ne-38 ° C) kwaye ushiye imzuzu engama-20. Emva kokugubungela, gquba kwiingingqi zeengxaki zomzimba kunye ne-algae, wambethe ifilimu kwaye ukhuseleke kakuhle, uvale ngephepha lokushisa okanye ingubo evamile. Le nkqubo ihlala malunga nemizuzu engama-30-60. Ubungakanani benkqubo kufuneka bonyuka kancane, ukuba inqubo yokuqala iqhubeka imizuzu engama-30, imizuzu yesibini-40. Ukulungiswa kwamanxweme okubuyisela ulwandle kubuyisela ukubunjwa kunye nomthunzi oqhelekileyo wesikhumba. Iyakususa ukukhathala, uxinzelelo, ukwandisa ithoni. Ukuthungwa kwe-algae kuya kunceda ukulwa namanqaku atywelayo. Ngokubanzi, kwi-algae egobileyo, umzimba ufumana inzuzo kuphela ngendlela yamaminerali ancedo, ukulandelela izinto, ukuphucula imetabolism kunye nokusabalalisa. Siyabulela kwiinkqubo ezifanelekileyo zokuxilisa, i-toxins ingcono.
I-algae ihlala igcwele izixhobo zaselwandle, ezikhokelela ekuhlaziyweni kwangaphambili kwesikhumba kunye nezilonda zesikhumba ziphilisa ngokukhawuleza.
Ukubambisa i-algae, kunye nezinye iinkqubo zokulwa ne-cellulite, kuya kunceda ukwakha umzimba omhle, njengoko le ntsebenziswano ilwa ne-cellulite kunye ne-flabbiness yolusu, isusa ama-cell cells, isusa ubuqhophololo.
Emva kwenkqubo yokuqala yokuvala, umthamo womzimba wehla ngo-2 cm, i-cellulite isuswe. Ukubona isiphumo sokubambisa kucetyiswa ukulinganisa ngaphambi nangemva kwenkqubo. Inqubo yokuqhawulwa kwamanxweme nganye ihlambuluke ukuya kumitha engama-centimeters of volume.
Ukususa kwiinqununu ukuya kwi-6-7 cm, kufuneka iinkqubo ezili-10-15. Lahla i-cellulite I neye-II izigaba zingaba nenani elifanayo leenkqubo (10-15 i-wraps). Kwi-cellulitis yezigaba ezi-3 kunye ne-4 i-krisiti iguqulwa. Inkqubo nganye ihlala iintsuku ezimbalwa. Ngethuba le nkqubo, njengomgaqo, umbane uhamba ngokukodwa nangona kwesi siko sisekhona. Kodwa kuya kuba mnandi ukuba umthamo awutholi ngaphezu kokulahleka.
Ukuthintela i-cellulite algal wraps kufuneka kuqhutywe ngonyaka kwiikhosi ezimbini. I-Algae iqukethe i-vitamin E, ezinye izinto ezilandelelanayo-i-zinc, i-iron, i-calcium, i-magnesium, i-lymphatic drainage eyandayo, i-oxygen metabolism. Into elandelwayo njenge-iodine isusa iiseli ezinamafutha emzimbeni.
Unokuthenga i-seaweed ukuze udibanise kwifomu elomileyo kwi-pharmacy okanye kwivenkile ekhethekileyo yezonyango. Ngaphambi kokusetyenziswa, i-algae i-steamed, kwaye ulusu luhlanjululwa ngokutshiza. I-algae isetyenziselwa ukukhumba isikhumba.
Indlela yokuba yintombazana eyintombazana
Izambatho zezobhathathi ngezandla zabo
Indlela yokuqhuba umntu onobudenge?
URadonica ngo-2016 ngumhla. Oko bayenzela uRadonitsa - amasiko